> Resource > Talooyin > Wedding Memory Book: Helitaanka Photos Wedding galay Memory Book
Xaflada arooska waa wax aan idin illoobi doona muddo nolosha. Laakiin faahfaahin badan oo horumar arooska aad ma noqon doono nasiib haddii aadan u qoraan arooska oo dhan galay video ama DVD. Iyada oo mar ay u dhacaan, xusuus bilaabaan in ay ku baxayn. Xaaladdan oo kale, sawiro waa waxa aad ku kalsoonaan kartaa. Photos Wedding duubi kartaa faahfaahin kasta oo kaa caawinaya in aad dib ugu yeeran xusuus maalintii aad u weyn.
A buug xasuus arooska isu geeyay oo dhan arooska photos, ka qayb-qaadashada in qubeyska, ka soo dhaweynta arooska inay Malabka. Waxaa ilaaliyaa arooska xusuus xumme ee Meyeydaan. Tani waxay saamiyada article arooska fikrado buug xasuus si ay adiga kuugu buug arooska qiimo.
Waa Maxay Wedding Memory Kitaabka iyo Waxa la dar?
buug xasuus Wedding waa hab fiican si aad ugu qortid xasuus arooska. Waxay sida caadiga ah ku jira oo dhan waqtiyo muhiim ah sida soo jeedinta, hawlgelinta, Roob idinkoo Shifaysan, doorashada dharka, maalinta arooska, iwm Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan jeclaan kitaabkan xasuusta arooska document-style, waxaad ku dari kartaa sharax dheeraad ah oo kale, oo ay ku jiraan dhammaan dhacdooyinka xusuus iyo sheekooyin qosol aad xiriirka oo dhan si ay u hawlgalinta.
A buug xasuus arooska caadiga ah sida caadiga ah waxaa ka mid ah:
• Title (aroosadda oo kooxdii magaca & ​​taariikhda arooska, goobta arooska optional)
• Qiyaastii aroosadda oo aroos
• aroosadda oo aroos ee Family Tree
• Our saaxibo
• Engagement Our
• Save Farriin Taariikhda ah
• Qorshayaal arooska
• Dharka The
• Roob My caruusadaha
• Maydho caruusadaha Photo Pages
• Martiqaad Wedding
• Wedding tababarasho
• The Wedding Maalinta
• Wedding Maalinta Photo page
• xisbiga arooska
• Reception The
• The Malabka
• 10 Waxyaabaha I Love About Waxaad
• Our Home First
• Our Sanadguurada Koowaad
Wedding Memory Book Fikradaha
Haddaba bal fiiriya fikrado buug xasuus arooska ah inaan u waxyoon. Waa fikrado si ay ugu fududaato in la sameeyo adiga kuu gaar ah album xasuusta arooska habboon style.
1. Wedding Memory Book Length . Guud ahaan, heer kasta ka kooban yahay 2 bog, Save marka laga reebo Farriin Taariikhda iyo Martiqaad Wedding. Si kastaba ha ahaatee, labada isqabta badan ka heli lahaa way ku adag tahay in ay doortaan sawiro. Ku xaddidan dhererka buug xusuusta, oo aad u leeyihiin in ay doortaan doorashada sawir arooska sare. Haddii kale, kala qaybsan tahay dhacdooyinka kuwa kor, tusaale ahaan, ka qaybgalka iyo diyaarinta arooska ee hal buug, maalinta arooska iyo Malabka kitaabkii kale.
2. Diyaari Ground ah . Inkasta oo aan idinkaga dhigi maayo aad leedahay buug xasuus arooska ilaa dib guriga ku soo noqon ka Malabka, tixraac liiska kor ku xusan inay wax u diyaariyaan. Waxaad sidoo kale mashquul ama habdhiska maalinta arooska noqon doonaa, oo aad u badan tahay in uu seegi doono wax. Sidaas weydii qof caawimo. Haddii aad seegto gaar ah wax, aad u heli karin on your album xasuusta arooska, weligiis. Tusaale ahaan, menu ka makhaayadda halkaa oo aad ku hawlan helay, clips hawlgelinta dhawaaqay wargeysyada, iyo qoraal nuqul ka mid ah toasts siiyey midiidinnadiisa ama xubnaha qoyskaaga.
3. Isku dar Photo iyo qoraalka . Ku dar qoraal sharaxaad leh in qaar ka mid ah sawirrada. Baaragaraaf-dheer No loo baahan yahay, laakiin keywords inuu kaa caawiyo inaad ugu yeerto xasuus la joogo in.
4. Waxaa ka mid ah Guest Book . Waxaa kale oo fikrad fiican in lagu daro mid ama laba bog isticmaalo sida buugga martida sababtoo ah waa xasuus macaan waxa saaxiibadaa iyo qoyskaaga ayaa sheegay in maalinta aad ugu gaar ah ee noloshaada. Ama ka dhigo buug martida gaar ah .
5. Mawduucan ah Kitaabka. Dooro style buug aad rabto in aad ka hana iloowin in aad weydiiso qofka aad jaalka ah ee talo. Waa buug ay laba idinka mid xumme doonaa muddo sanado ah in ay isu yimaadaan,.
6. La tasho Professionals . Waxaad u diyaariyay wax kasta ilaa ay marayso. Waa markii inaad la tashato xirfadlayaasha si aad buug xasuus arooska rumowday. Waxay wanaag la qabanaya si toos ah, sawir gelinaya si sax ah iyo ugu dambayntii ka dhigi buug xasuus arooska kaamil ah oo aad u noqon doono.